Catherine Packer, Mpanoratra ao amin'ny Knowledge SUCCESS
Catherine dia mazoto amin'ny fampiroboroboana ny fahasalamana sy ny fahasalaman'ny mponina tsy voakarakara eran'izao tontolo izao. Manana traikefa amin'ny fitantanana tetikasa izy; fanampiana ara-teknika; Fanaraha-maso, fanombanana, ary fianarana (MEL); ary fikarohana ara-tsosialy sy fitondran-tena qualitative sy quantitative. Ny asan'i Catherine vao haingana dia ny fikarakarana tena; DMPA-SC self-injection (Sava lalana, mitsambikina mihoatra-up, ary fikarohana); fitsipika ara-tsosialy mifandraika amin'ny fahasalaman'ny fananahana ny tanora; fikarakarana aorian'ny fanalan-jaza (PAC); Fisoloana vava ho an'ny vasectomy amin'ny ambany- ary ireo firenena manana fidiram-bola antonony; ary ny fitazonana ny serivisy VIH ho an'ny tanora mitondra ny tsimokaretina VIH. Miorina ao Colorado izao, USA, nitondra azy tany amin'ny firenena maro anisan'izany Burundi ny asany, Kambodza, NÉPAL, Rwanda, SÉNÉGAL, i Vietnam, ary Zambia. Manana mari-pahaizana Master of Science amin'ny Fahasalamam-bahoaka manokana momba ny fahasalamana ara-pananahana iraisam-pirenena avy amin'ny Sekoly Johns Hopkins Bloomberg momba ny Fahasalamam-bahoaka izy..
chat_bubble0 fanehoan-kevitra fahitana632 hevitra
chat_bubble0 fanehoan-kevitra fahitana11006 hevitra
chat_bubble0 fanehoan-kevitra fahitana1912 hevitra
chat_bubble0 fanehoan-kevitra fahitana14194 hevitra